बारामा सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाए १०० रुपैयाँ जरिवना – Health Post Nepal
बारामा सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाए १०० रुपैयाँ जरिवना
२०७७ असार १८ गते ११:०७
असार १८– जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाराले जिल्लाका भरका सर्वजनिक स्थलमा मास्क अनिवार्य गरेको छ । समितिको जेठ १५ गतेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
‘मास्कको प्रयोगले संक्रमण सर्ने कुरालाई ९० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्तो निर्णय गरेका हौं’ उनले हेल्थपोस्टसँग टेलिफोनमा भने ।
पण्डितले लकडाउनका समयमा पनि उलङ्घन गर्ने २०० भन्दा बढीलाई जरिवना गरेको भन्दै अब मास्क प्रयोग नगर्नेलाई पनि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० अनुसार कारवाही गर्ने बताए ।
‘हामीले निर्णय गरेपछि नै धेरैले लगाउँन थालेको पाएका छौ,’ उनले भने, ‘आजसम्म सचेतना अभियान चल्छ भोलीबाट जरिवना नै सुरु हुन्छ’ ।
ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत दिइएको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा रु. ६०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
बाराका डिएसपी गौतम मिश्रले पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापनको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आउनासाथ लागु गराइने बताए ।
बारामा मात्रै कोरोनाबाट २ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने, हालसम्म १२६ संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
भाइरससँग बच्न र रोगको फैलने दर घटाउन धेरै देशहरुले घरबाहिर निस्किँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गराउन ठूलो रकम जरिवानासमेत तोकेका छन्।
तर, नेपालमा सरकारले भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा प्रभावकारी मास्कको प्रयोग र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने कुरालाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गरेको छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि जुलाइ पहिलो साता नयाँ निर्देशिकामार्फत् सबै व्यक्तिलाई यसका बिरामी नजिक, सार्वजनिक स्थान तथा भीडभाडमा जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउन सुझाव दिएको थियो।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले पनि सुरुमा कोरोनाबाट बच्न सामान्य मानिसले मास्क लगाउन खासै अर्थपूर्ण नरहेको दाबी गरेको डब्लुएचओले समेत पछिल्लो दिनमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उपस्थित हुँदा मास्को प्रयोग गर्न सुझाव दिएको बताए।
यसरी गएको छिटा, हात, अनुहार वा अन्य अंगसम्म पुग्ने र त्यस्तो अवस्थामा भाइरस नसरिसकेको व्यक्तिले हात वा अन्य माध्यमबाट फेरि सर्न सक्छ।
उनका अनुसार यति संक्रमित व्यक्तिले सामान्य श्वासप्रश्वास गर्दा १ मिटर टाढासम्म नाक वा मुखबाट निस्किने थुक वा सिँगानका मसिना छिटाबाट भाइरस सर्नसक्छ।
खोक्दा वा हाच्छ्यूँ गर्दा यस्तो छिटा करिब २ मिटर (६ फिट) भन्दा टाढासम्म पनि पुग्नसक्छ।
त्यसैले चिकित्सकले मास्कको प्रयोग र व्यक्तिगत दूरी कायमले रोगको जोखिम घटाउने बताउँछन्।
उनले संक्रमणबाट आफू र अरुलाई पनि जोगाउन सार्वजनिक स्थलमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विज्ञका अनुसार एउटा मानिस हिँडेको वा उभिइरहेको अवस्थामा पनि क्रस गर्दा कम्तीमा दुई पटकसम्म श्वासप्रश्वासको एक्पोज हुन्छ।
विज्ञहरूले मास्कको सहज उपलब्ध नहुनु, बानी नपरेको अवस्थामा श्वासप्रश्वासमै अप्ठेरो महसुस गर्नु जस्ता कारणले सहज मानिरहेका छैन।
सार्वजनिक उपस्थिति अनियन्त्रित हुने तर, मास्क व्यक्तिगत दूरीमा ख्याल नगर्ने अवस्थामा राज्यको संवेदशीलताको समेत कमी देखिएको विज्ञको भनाइ छ।
नेपालमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित लक्षणविहीन हुनाका कारणले पनि मास्कको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ।